Na-egwu egwuregwu na a ihuenyo mmetụ nwere ike ịbụ mgbagwoju na manụ. Mgbe ha na-enwe ike whisk gị Android ekwentị na creep na a obere zuru fantasy na gị nri ehihie bụ magburu onwe, ndị na-enweghị tangible mmeghachi omume nwere ike mortify ahụmahụ. Obi ụtọ na-, e nwere otu mkpọ controllers na ike effortlessly itinye na gị Android na ngwaọrụ ma ị nwere ike igwu egwuregwu na-adịghị.
A egwuregwu njikwa bụ a gadget eji na egwuregwu ma ọ bụ ntụrụndụ usoro iji nye ọsọ ọsọ ka a video egwuregwu, na-emekarị jikwaa ihe na egwuregwu. A njikwa na-adịkarị jikọrọ a na kọmputa site n'ọnụ a USB ma ọ bụ eriri. Input ngwaọrụ na e categorized dị ka egwuregwu controllers nwere ụmụ oke, gamepads, keyboards, joysticks, wdg Akpan akpan nzube ngwaọrụ, dị ka ìhè egbe maka agbapụ egwuregwu na sterịn wiil maka ụgbọala egwuregwu, bụ nakwa otu onye nke egwuregwu controllers. Game controllers e bu n'obi na enwekwukwa ihe karịrị afọ dị ka onye ọrụ na-anabata dị ka puru.
Top 10 Android Game controllers
1. Steel Series Stratus Ikuku Gaming njikwa
Ọ bụ otu ihe kasị mma android egwuregwu controllers. Steel Series Crafts ole na ole ezi Ịgba Cha Cha ngwa, gụnyere Ọnọdụ Ikuku Gaming njikwa. Nke a dị ike ngwa ọrụ na iOS Ngwa na mobile egwuregwu na-njikwa-nyeere. Ọ utilizes Bluetooth 2.1 ka di na nwunye na ekwentị gị na-azọrọ na e iri gara awa kwa ụgwọ. Enịm si a bit dị ka onye na Xbox njikwa kwesịkwara maara nke ọma.
2. Phonejoy njikwa
The Phonejoy njikwa na-zubere gbanwee ekwentị gị gaa na a egwuregwu njikwa. Na mgbakwunye na amamihe ẹkenịm buttons, nke na-kewara abụọ ngalaba iche site na gị Android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, ya akụkụ-egosi na a na dịtụ ọma ọnụ. Pricier nchịkọta-etinye na ọzọ Njikọ dị ka a 3.5mm audio nkwụnye.
Nke a Android egwuregwu controllers bụ otu n'ime ihe ndị kasị chọrọ na-ewu ewu egwuregwu controllers ebi. Nke a njikwa nwere ihe kachasị zoro protocol maka ewu ewu tegra Android egwuregwu, nke bụ ihe e ji mara na Crafts ya otu n'ime ndị kasị mma Bluetooth egwuregwu controllers. Nke a njikwa nwere ihe abụọ isi mkpịsị aka ruo, buttons, directional na mpe mpe akwa na abụọ triggers. Nke a Android egwuregwu njikwa nwere àgwà nke mfe ịchịkwa ndị egwuregwu. Egwuregwu a njikwa na-agụnye ihe ngwa nke nwere ihe ike ibudata egwuregwu profaịlụ na aga utu aha.
Ahịa: $ 75
Nke a Android egwuregwu njikwa nwere ike recharged na ọ nwere anọ iche iche edinam ụdịdị maka Android agụta keyboard, òké, joystick na Nchikota. Nke a iCnotrolIPad egosiputa niile buttons na site na ị maara na-agụta directional buttons, abụọ isi mkpịsị aka pad na triggers. Ọ na-egosiputa a siri ike mmezi mgbodo na-akpali si azụ nke njikwa ka guzosie ipigide ekwentị gị unit. Ọ na atụmatụ comfy roba mgbachi n'akụkụ. iControlPad nwekwara a USB odori USB otú echegbula na gị na batrị ga-ekubi ume na ụzọ. Egwuregwu a njikwa nwekwara posses 55 isi keyboard na ubu buttons na elu àgwà Dpad. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ọkọlọtọ zoo. Ọ bụrụ na ị na-ana a Android egwuregwu njikwa ozugbo ọ ga-adịru rue 14 awa.
5. Gametel Bluetooth njikwa
Ahịa: $ 50
Nke a gam akporo na iOS egwuregwu njikwa utilizes a mmiri-kwajuru mpikota onu na-ekwentị gị ala mgbe ị nka ojiji nke directional-na mpe mpe akwa na ndị ọzọ na ihe onwunwe buttons. Ọ utilizes a Bluetooth njikọ iji sonyere na a Micro USB na-ana. Ọ na-arụ ọrụ ma android na iOS ngwaọrụ.
6. Joypad Game njikwa
Nke a bụ eze na-eji ngwa, ma a witty otu. Ọ gbanwere ekwentị gị gaa na a njikwa otú i nwere ihe dị ukwuu nke ibu buttons inupụ na-egwu egwu a jikọrọ mbadamba. Mma niile, ọ bụ free nke na-eri otú e nweghị-eme ka nye onye a laa ma e wezụga gị na o siri ike ebu abụọ Ngwa na gị ozugbo. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma android egwuregwu controllers.
Nke a bụ ihe ndị kasị mkpa na-ewu ewu njikwa maka Android ngwaọrụ. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma Android Bluetooth egwuregwu controllers. Ọ utilizes 2 Aaa batrị. Nke a Android egwuregwu njikwa nwere njide mgbachi ekwentị gị tightly mgbe ị na-egwu ya edekọ. Ọ bụla ekwentị na obosara nke 3.2 sentimita asatọ dabara na egwuregwu a njikwa. Ma, dị ka egwuregwu a njikwa na-esonyere na Bluetooth otú ị na-adịghị mkpa itinye ya na ekwentị gị. Nke a Android egwuregwu njikwa na-arụ ọrụ na mbadamba. Nke a Android egwuregwu njikwa nwere batrị nke nwere ike ogologo ruo awa 18.
Nke a nkọ na mma android egwuregwu njikwa bụ obere ọnụ ala ngwa. Ọ bụ tumadi a mkpịsị aka mkpisi na ruo gị na ihuenyo otú i nwere ike inwe ihe accurateness na Arcade ochie. Jide n'aka na ngosi bụ unyi free tupu n'ịnọgide na i kwesịrị iji nweta ò agbara nke a obere gadget. Nke a Android gadget bụ otu n'ime ihe ndị kasị chọrọ Ngwa.
Nke a bụ ihe Ihe-na-achọ njikwa nke nwere buttons dum ezi ebe. Ọ nwere ike na-enịm ke n'akpa uwe kwa, nke mere na ị pụrụ ibu ya gburugburu na-enweghị nsogbu. Ọ na-egosi na a dịgasị iche iche nke agba, nwere ihe na-wuru rechargeable batrị na a ezi uche price mkpado. Nke a android egwuregwu njikwa na-eji na ọtụtụ nyiwe.
Ahịa: $ 19.95
Nke a android egwuregwu njikwa bụ idiocha n'ihi na ọ kwe gị ka ojiji nke a njikwa ị nwere ike ugbua. Ị na-eji $ 19.95 dollar iji jidere a dị ịtụnanya egwuregwu njikwa na kasị mma ikike.
> Resource> emulator> controllers n'ihi na gị Smartphone: Best Android Game njikwa